Raha lany ve ireo dia tsy hanaiky valim-pifidianana ? Maninona raha manohana kandida tokana ? Tsy lojika ny zava-miseho, hoy izy raha nilaza ny heviny tetsy Ankatso, nandritra ilay hetsika oniversiten’ny demokrasia sosialy. Ny mikasika ny CENI kosa dia azon’ireo antoko manana ny maro an’isa ao amin’ny antenimieram-pirenena ny mandrava azy na rahampitso aza. Lalàna izany. Tsy tokony hampitaraina antsika, indrindra ireo antoko manana maro an’isa, ny fipetrahan’ny HCC sy CENI eo satria izy ireo ihany no nametraka azy teo.